mMusicNet - There's another way!
INVITE YOUR FRIENDSGet 1 Week Free
Q - MMN Website နဲ့ App မှာ Register ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
A - MMN Website Home Page ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ သော့ပုံစံမှတစ်ဆင့် Register ထဲသို့ ဝင်ပြီး Name,Telephone Number,Email Address, Password ဖြည့်ပြီး Summit ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် Register လုပ်ထားသော Email မှတစ်ဆင့် “Yes,This is my email” ကို Click နှိပ်လိုက်လျှင် Register လုပ်ထားသည်မှာအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါသည်၊ Email မရှိသူများအတွက်လည်း Facebook နှင့် Log In ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Q - တေးသီချင်းများ၊ Albums များကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်မလဲ?
A - MMN Website (သို့) App မှတစ်ဆင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်း (သို့) Albums ထဲသို့ ဝင်ပြီး “BUY” ကို Click နှိပ် ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Q - ဝယ်ယူထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ဘယ်လို Download ပြန်လုပ်မလဲ?
A - ပထမဦးစွာ Login ဝင်ပြီး View Profile History ထဲရှိ Songs (သို့) Album အောက်တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။
Q - mPlay (Streaaming) ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလည်း ?
A - သီချင်းနမူနာများကို Login ဝင်ရောက်ရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ နားဆင်နိုင်ပါသည်။
mPlay (Streaming) နားဆင်ရန်အတွက် အတွက် Login ဝင်ရောက် ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
mPlay (Streaming) ကို စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် ပထမဦးစွာ တစ်ပတ်၊ တစ်လ၊ သုံးလ၊ ခြောက်လ ၊တစ်နှစ် စသည်ဖြင့်မိမိနှစ်သက်ရာ mPlay Subscribe Plan ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။.ဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသောတေးသီချင်းများအား Save လုပ်ခြင်းနှင့် မိမိစိတ်ကြိုက်တေးသီချင်းများအား Playlist များ ဖန်တီးထားနိုင်ပါသည်။
Invite Your Friends ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် mPlay (Streaming) Service တစ်ပတ်စာ ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
Q - MMN မှ တေးသီချင်း များအား ဝယ်ယူနားဆင်ရန် မည်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် Top-Up (Redeem) ပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
A - MMN က Prepaid Top Up (Redeem) စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပြီး
MMN Prepaid Top Up Card ,Paypal (Master,Visa) MPU (Myanmar Payment Union)။အသုံးပြုမည့် MPU Card သည် Online မှ တစ်ဆင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်သည့် e-commerence စနစ်ကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မျာမှ ရယူပြီးဖြစ်ရမည်။
Wave Money, OK $, MMN Account (09774806050) သို့ငွေပေးပို့ပြီး Top-Up ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။MMN မှ Top Up Pin အား SMS မှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Q - တေးသီချင်းများနဲ့ တေးအယ်လဘမ် များကို MMN Website ပေါ်တွင် အခမဲ့ (သို့) ရောင်းချ ဖြန့်ချိလိုပါတယ် မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရပါမလဲ?
A - အခမဲ့ (သို့) ရောင်းချ ဖြန့်ချိလိုပါက
No 15,Kanbawza Avenue Street,Shwe Taung Gyar 1st Quarter,Bahan Township,Yangon,Myanmar.
Online Tel:092 6480 6050,097 7480 6050,099 6480 6050
Viber;+95 92 6480 6050
Office Tel;092 6227 7337,092 6227 7447,097 8680 1060,099 7680 1060
Viber;+95 92 6227 7337
© 2014 - 2017, MMN
Developed by Bangoo Technology.
Is Subscription process On?